शकिलाकाे जर्ज'र जीवन कथा: आमाले नै याै'न व्यवसायतिर धकेलीदिइन् - satkar post
शकिलाकाे जर्ज’र जीवन कथा: आमाले नै याै’न व्यवसायतिर धकेलीदिइन्
मंसिर ९, २०७६ मा प्रकाशित
मुम्बई : बाआमाले कहिल्यै पनि आफ्ना छाेराछाेरीलाई नराम्राे शिक्षा दिँदैनन् । राम्रा-राम्रा अर्ती र उपदेश दिने गर्दछन् ! ता कि भविष्यमा समाज सुउँदाे, सबैले वाहवाही गर्ने काम गराेस् भन्ने चहान्छन् । तर विडम्बना साउथ इन्डियाकी चर्चित पो’र्न नायिका शकिला खानको जीवन कथा भने फरक छ । शकिला आफैंमा एक चर्चित हस्ती हुन् र उनी आफ्नै परिवारका कारण जीवनमा धेरै कुरा सहन बा’ध्य भइन् ।
उनकाे जीवनकाे कथा ज’र्जर गर्ने खालकाे विषयवस्तुले भरिएकाे छ । शकिलाको जीवन यसरी उता’रचढावले भरिएको छ कि सुन्ने जाे काेहीकाे मन कट’क्कै हुन्छ । यतिसम्म कि देवता समानकी आफ्नै आमाले पैंसाका लागि यौ’न व्यवसायमा धकेलीदिइन् । परिस्थिति नै यस्ताे बन्याे की सुखसँग बाँच्नका लागि घी’नलाग्दाे काम गर्न बा’ध्य भइन् । उनले २० वर्षको उमेरमा नै सफ्ट पो’र्न फिल्म ‘प्लेगर्ल’ बाट आफ्नो करियर सुरुवात गरिन् ।
चेन्नईमा जन्मिएकी शकिलाको बाल्यकाल गरिबीमा बित्यो । त्यही गरिबी र अभावले नै उनलाई साेच्दै नसाेचेकाे पेशातिर हानिनु पर्याे । सायद उनले विवशताकै कारण ६ कक्षासम्म मात्र औपचारिक शिक्षा लिइन् । शकिला साउथ फिल्ममा सक्रिय छिन् । उनले मलायलम, तमिल, तेलगु र कन्नड फिल्ममा काम गरिसकेकी छन् ।अन्य केही फिल्ममा समेत सपोर्टिङ नायिकाको भूमिका निभाएकी छिन् । सन् २००० मा मलायली भाषाको फिल्म ‘किन्नर थुंबिकल’ आयो । यो फिल्म निकै चर्चित भयो र केही भाषामा डबिङसमेत गरियो । यही फिल्मबाट उनी चर्चामा आइन्, तर ‘एडल्ट’ नायिकाका रूपमा । उनले अहिले २५० भन्दा बढी फिल्ममा काम गरिसकेकी छन् । आफ्ना भाइ बहिनी र आमालाई पाल्नकै लागि उनले यस्ता फिल्ममा काम गरिन् ।
फिल्म क्षेत्रमा चर्चा कमाएकी उनले आफ्नो जीवनी लेखिन् र मलयाली भाषामा छपाएकी छन् । उक्त पुस्तकअनुसार सानै उमेरमा नै उनलाई एक व्यक्तिले बला’त्कार गरेका थिए । उनले शकिलाकी आमालाई पैसा दिएर बला’त्कार गरेका थिए । अब शकिलाको जीवनीमा आधारित फिल्म आउँदैछ, जसमा उनको उतार’चढावपूर्ण जीवन देख्न सकिनेछ ।
डुङ्गैडुङ्गाको शहर मङग्रोल
मङग्रोल, जुनागड, गुजरात भारत । तस्बिर : इन्द्र पुन
म्याराथुन मा सुनमाया बुढा नेपालको झण्डा फहराउँदै विश्वका ९३ देशलाई पछी पार्दै भइन प्रथम !
दिपेन्द्र थापा मगर ...
विश्वकै धनी व्यक्ति बने एलन मास्क
बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउने सरकारको निर्णय
सिन्दूर हाल्दा-हाल्दै प्रहरी आएर, रिसाएका बेहुलाले बेहुलीकै बहिनी लिएर टाप कसे
सुन्दर, तर सुनसान लुक्लाबजार (फोटो फिचर )